HoLOLo….DiLoLO – Nothing. Just feelings.
What were posted
What were posted Select Month May 2021 (3) March 2017 (1) February 2017 (1) November 2016 (1) October 2016 (1) September 2016 (2) October 2015 (1) September 2015 (1) July 2015 (2) May 2015 (1) January 2015 (1) December 2014 (3) September 2014 (1) May 2014 (1) January 2014 (3) October 2013 (1) September 2013 (1) June 2013 (1) May 2013 (3) April 2013 (1) January 2013 (4) October 2012 (1) April 2012 (2) January 2012 (2) December 2011 (2) November 2011 (2) October 2011 (5) April 2011 (2) December 2010 (1) November 2010 (3) September 2010 (2) August 2010 (5) June 2010 (3) May 2010 (1) April 2010 (2) March 2010 (5) February 2010 (7) January 2010 (4) November 2009 (1) October 2009 (6) September 2009 (3) August 2009 (7) July 2009 (6) June 2009 (10) May 2009 (5) April 2009 (4) March 2009 (3) February 2009 (8) January 2009 (5) December 2008 (12) November 2008 (10) October 2008 (14) September 2008 (1) August 2008 (5) July 2008 (15) June 2008 (3) April 2008 (5) March 2008 (2) February 2008 (9) January 2008 (7) December 2007 (6) November 2007 (6) October 2007 (4) September 2007 (22)
no wants. no hope.
twit twitter twittest
Mango Lemonade, Cheese Cake, Anne Marie &@Sunday hololodilolo.wordpress.com/2021/05/02/man…5months ago
ただいまー hololodilolo.wordpress.com/2021/05/02/%e3…5months ago
RT @ArkerKyaw: What’s happening in Myanmar ! #WhatsHappeningInMyanmar https://t.co/Q8Q8rKVkMT6months ago
lovely nyi nyi
Ko NLS 18+Den
မာမားကြက်သားဆီချက်တထုပ်၊ စီပီကြက်အူချောင်းနှစ်ချောင်းနဲ့ သီးစုံကြက်သားလုံးသုံးလုံး၊ ရေညှိခြောက်ဖြူး။
တကယ်စားချင်တာက facebookမှာကြည့်တဲ့ ယိုးဒယားမလေးတွေ အိုးကြီးတွေနဲ့ ချက်ချက်ပြတဲ့ ခေါက်ဆွဲခြောက်ကို အစပ်မျိုးပေါင်းစုံနဲ့ စားချင်တာ။အစပ်ကတော့ မစားရဲလို့ ……… ဒါက ဖြေသိမ့်စာပါ။
May 2, 2021 hololodilolo	Leaveacomment
Mango Lemonade, Cheese Cake, Anne Marie & Sunday
သူရဲဘောကြောင်သလောက် အပျင်းတော့လည်းထူတဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့။
သရက်သီးမှည့်ကို ကျိတ်တယ်။ ဒီအတိုင်း ၃ဇွန်းလောက်သောက်လိုက်သေးတယ်။ ဗိုက်ပြည့်ပြီး အီတယ်။ အရင်နှစ်က တကူးတကမကြုံကြုံအောင် သွားသွားသောက်ခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာမန္တလေးထဲက အသီးဖျော်ရည်ဆိုင်လေးဆီက သရက်သီးဒိန်ချဉ်ကိုသတိရ။ ရောပစ်ဖို့ ဒိန်ချဉ်ရှာတော့ ဘလူးဘယ်ရီဒိန်ချဉ်ပဲရှိနေတော့တယ်။ ရှိတဲ့ Lemonade ကိုပဲရောထည့်ပစ်ပြီး Mango Lemonade လုပ်ပစ်လိုက်တယ်။
သရက်သီးတွေ ဖျော်ပစ်ရတာ အကြောင်းရှိတယ်။ အဖေစျေးကနေ ၂၀၀တန်တွေ ဝယ်ဝယ်လာလို့ စိတ်တိုပြီး online ကမှာလိုက်တာ။ အစက ၁၅လုံးလောက်မှာဖို့ကို ရောင်းတဲ့ ညီမလေးရဲ့ အသံပျော့ပျော့ကို အားနာတာနဲ့ တခြင်းလုံး ၂၀၀၀၀ နဲ့မှာလိုက်တာ။ ပို့ခ ခြင်းဖိုး ဘာညာနဲ့ ၂၄၀၀၀ ကျတယ်။ အလုံး၅၀ပါတယ်။ အဖေ့ကိုတော့ ၂၀၀၀၀ လို့ပြောတာပေါ့။ ကံမကောင်းတာက အကုန်မှည့်နေပြီ။ သရက်သီးမှည့် ပေါ်ကာစက တယောက်စီက မှာဖူးသေးတယ်။ သူက အမှည့်၊ အုပ်ထားဖို့ လိုသေးတာ စသဖြင့် ရောထားပေးပြီး လတ်တော့ အထားခံတယ်။ ဖြည်းဖြည်းချင်း စားလို့ရခဲ့တယ်။ ခုတခါက မှည့်နေပြီး ပူလည်း ပူဆိုတော့ကာ သရက်သီးမှည့် အလုံး၅၀နဲ့ ကြံရာမရတော့ပြီလေ။ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူပြီး၊ အသီးလည်းစား၊ ဖျော်လည်း သောက်ရတာပါပဲ။အဆင်မပြေရင် ရေခဲချောင်းပါ လုပ်ရတော့မယ်။
cheese cakeကတော့ city mart သွားရင်း လမ်းကြုံဆွဲလာတာ။ အရမ်းကြိုက်တဲ့အစားအစာတွေဟာ တယောက်တည်း စားရင် သိပ်ခံတွင်းမတွေ့ပါလားလို့ သေချာသိလာတဲ့ ဒီနှစ်ထဲ.. ။ ရယ်စရာကောင်းတာက ဒီလိုပဲ စားတာကတော့ စားဖြစ်နေတာပါပဲ။
Anne Marie ရဲ့ 2002ကို version ပေါင်းစုံ ပျင်းရိစွာ နားထောင်ရင်း မျက်စိရှေ့က အကုန်စားရမယ့် နေ့လည်ခင်းပေါ့။
အာရုံတွေ စူးစိုက်လို့မရတဲ့နေ့ရက်တွေ၊ ဘာကိုအလိုမကျမှန်းမသိတဲ့နေ့ရက်တွေ၊ အထီးကျန်တယ် ပြောရမှာ ရှက်စရာကောင်းတဲ့ ဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာ သတိတရ ပြန်လာကြည့်ဖြစ်တာမျိုးပေါ့။
ဘာမှဖတ်မရတဲ့အတူတူ အကုန်ဖျက်ပစ်လိုက်ဖို့က ပိုကောင်းတာ။ တကူးတက ပြန်ပြောင်းဖို့လည်း စိတ်ကူးမှမရှိဘဲကို။ အထွေအထူး စွဲလမ်းနေလို့လည်း မဟုတ်.. ဖျက်ရမှာ ပျင်းနေတာ။
တခါတလေ ဟိုရေး ဒီရေး လာရေးတာပေါ့… တွေး။ တွေးတာပေါ့…လေ။
တက်ပြီးရင် ပြန်ကျလေ့မရှိတဲ့ စျေးနှုန်းတွေလိုပဲ..
ထုနဲ့ထည်နဲ့ ထွားကြိုင်းလာနေတဲ့ အတ္တတွေ၊
ထားရာနေ စေရာသွား.. ပစ်ချခဲ့တဲ့နေရာ ကျန်မနေရစ်တတ်တော့ဘဲ
ရှားရှားပါးပါး…… ကျနေဆဲနဲ့ ကျရိပ်ကျခြေ ဆက်ရှိနေတာတခုကတော့
March 6, 2017 hololodilolo	Leaveacomment
ကိုယ်ပြောပါကော.. ချစ်ရယ်ကိုယ်တို့ဝေးကြရင် ကံတွေကောင်းလာမယ့်အကြောင်း။
ကျောခိုင်းပြီးတဲ့ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း..ကောင်းကင်ကြီးက လင်းကျင်းလာတယ်မဟုတ်လား
ရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေတွေမှာလည်း ပန်းရနံ့တွေ သင်းသင်းမွှေးလို့လေ။
မနက်နိုးချိန်ကစလို့ မျက်လုံးတွေက ပြုံးနိုင်ပြီး နှုတ်ခမ်းတွေက ညအိပ်ရာဝင်ချိန်ထိ အားရပါးရ ရယ်နိုင်ကြတယ်။
ကိုယ်တွေ ဝေးသွားကြရင် အခြေအနေတွေသာယာလာမယ့်အကြောင်းကိုယ်ပြောခဲ့ပါကောလား.. ချစ်ရဲ့။
အညံ့အသက်တွေ အနားမှ မသီနိုင်အောင် မတော်တဆ အိမ်မက်ထဲ ဖြတ်လျှောက်မိရင်တောင်မျက်နှာလွှဲသွားကြရအောင်ပါ။
February 16, 2017 hololodilolo	Leaveacomment